Daahir Riyaale oo kala qaybiyey Salaaddiintii Beesha Waqooyiga iyo Galbeedka Hargeysa | Somaliland.Org
January 28, 2009	Hargeysa (Somaliland.org) – Xubno ka mid ah Salaaddiinta beelaha Waqooyiga iyo Galbeedka Hargaysa, ayaa kulan ay xalay la yeesheen Madaxwayne Riyaale lagu qanciyay in dadka degan goobaha xaniban ee aan diwaangelinta laga qaban ee Waqooyiga Hargaysa, aanay suuragal ahayn wakhtigan in dadkaasi la diwaangeliyo.
Kulankan xubnaha Salaadiinta iyo Madaxwayne Riyaale oo ka dhacay Qasriga Madaxtooyada, ayaa la sheegay in Madaxwaynaha Somaliland Daahir Riyaale Kaahin uu u soo jeediyay Salaadiintaasi in aan la joogin wakhti iminka laga hadlo diwaangelinta dadkaasi, hase ahaatee wakhtiyada doorashooyinka dambe laga tashan doono waxa laga yeelayo deegaankaas. Goobaha kale ee gobolka Gebilay ee muranku uu ka taagan yahayna uu u xilsaari doono Madaxwayne ku xigeenka Somaliland marka ay doorashadu dhamaato.
Salaadiintan beelaha Waqooyi iyo Galbeedka Hargaysa, oo ka mid ahaa Salaadiinta Beeshoo isku dhan oo hore Madaxwaynuhu kulan ay la yeesheen uu kaga hor kacay, ayaa badidoodu aanay ka war qabin kulankaasi xalay. Waxaanay Kooxdan Salaadiinta ah ee xalay la kulmay Madaxwayne Riyaale ay qaadeen tallaabo xaqoodii ay ku duudsiyeen dadka goobaha waqooyiga degan ee xukuumaddu ka takoortay xaqoodii muwaadinnimo.
Arrintan ayaa la sheegay in baryahanba uu xidhiidh dhex socday, kooxdan Salaadiintana gadhwadeen u ahaa Cismaan Buur Madow.